Iyo yekupedzisira vhezheni ye macOS 10.13.2 ikozvino yawanika kurodha pasi | Ndinobva mac
Iyo yekupedzisira vhezheni ye macOS 10.13.2 ikozvino yave kuwanikwa kurodha pasi
Vakomana vanobva kuCupertino vaburitsa vhezheni yekupedzisira ye macOS 10.13.2, kuvhurwa kunoitika mwedzi mushure mekutanga kwebeta yekutanga uye inomiririra yechipiri kuvandudzwa kukuru kweMacOS High Sierra, kubvira payakatangwa zviri pamutemo kupera kwaGunyana. . Kuti tiise iyo isu tinongofanirwa kuenda kuMac App Store, tinya pawindows yekuvandudza uye mushure memasekondi mashoma iyo yekupedzisira vhezheni ichaonekwa kurodha pasi, chiitiko chinotora zvinopfuura 1,5 GB. Kuva chiitiko chakakosha, zvinodikanwa kuti utangezve kuitira kuti kusimudzira mukuchengetedza, kugadzikana uye kuenderana zviiswe nenzira kwayo. Pano isu tinodonongodza nyaya huru dzeichi chechipiri chikuru kugadzirisa kwe macOS High Sierra.
Semazuva ese, Apple haidi kutiburitsa tichitsanangura zvese zvagadziriswa mune ino gadziriso, uye inongotarisira kudonongodza nhau dzatinogona kuwana mushanduro 10.13.2 yeMacOS High Sierra, nhau dzinotevera:
Yakagadziridzwa kuenderana nemamwe echitatu-bato USB odhiyo madhizaini.
Inovandudza VoiceOver yekufambisa kana uchiona zvinyorwa zvePDF pamwe neiyo Ongororo application.
Yakagadziridzwa kuenderana kweBraille kuratidza neMail.
Iyi yekuvandudza iri kuwedzera kune iyo iyo vakomana veCupertino vakaparura kweinopfuura vhiki rapfuura kugadzirisa matambudziko ekuchengetedza anga aonekwa, matambudziko akatibvumidza kuwana chero Mac kuburikidza neMushandisi mushambadzi, kubva kwatingawana mushandisi mushandisi kushandisa zita rekushandisa "mudzi" pasina chero password.
Apple yakamanikidzwa kukumbira ruregerero pachena, vachitaura kuti havana kunzwisisa kuti kutadza kwehukuru hwakadai kwaigona sei kuvapunyuka. Zvingangodaro, rinopfuura rimwe timu rekusimudzira macOS rakaona mapfupa avo mumutsara wekushaikwa kwemabasa, mushure mekusekwa kwakaitwa neApple nekuchengetedzwa kwevatengi vese vakabheja uye vachiramba vachidaro papuratifomu yavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo yekupedzisira vhezheni ye macOS 10.13.2 ikozvino yave kuwanikwa kurodha pasi
Kutaura chokwadi, Apple haisi kuita zvakanaka zvachose. Hapana kwekutendeuka kana wasangana nedambudziko. Ivo vanofanirwa kuve neforamu uye kuti vese avo vakakanganiswa vanotaura mabhugi anoonekwa nevashandisi. Nenzira iyi software inenge yakagadziridzwa zvakanaka.
Mune ino yazvino vhezheni, pandakatangazve komputa yangu yakasara ine dema skrini. Ini ndaifanirwa fomati iro rakaomarara dhiraivha uye kurodha yazvino vhezheni 10.3.2 kubva kuApp Store.
Ini ndaida kudzokera ku macOS Sierra asi haina kuoneka chero muApp Store.
Mutongo wavakaudzwa nezveFat 32, unoibata seFat, unoramba wakadaro. Ini handikwanise kutora faira rakakura kupfuura 2Mb kuUSB.
Ini handisi kufara kana vakadzinga programmer asi vanoda odha.
Amazon Prime Vhidhiyo ikozvino yavapo yeApple TV
Apple Mepu inosanganisira zvifambiso zveruzhinji muFlorida